श्रीमतीको यस्तो व्यवहारले थाहा पाउँनुहोस् अरुसँग सल्केको छ की छैन् ! – ताजा समाचार
श्रीमान श्रीमती बीचको नातालाई पबित्र नाता भन्ने गरिन्छ । तर त्यहि पबित्र मानिएको नाता सानो सानो कुराहरुमा ख्याल नगर्दा टुट्न पनि सक्छ । श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्धमा अविश्वासले जरा गाड्यो भने राम्रो सम्बन्ध पनि क्षणभरमा नै तहस नहस हुन सक्छ । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध छुट्टिनु भनेको दुबैको कमजोरी हो । आजभोलि विरलै पाइने गरेको यस्ता घ ट ना ले समाजमा नराम्रो संस्कारले ठाउ लिनु हो ।
यसरी बैवाहिक सम्बन्धमा देखिएको कमजोरी भनेको श्रीमान श्रीमतीले एकअर्काको विश्वास नगर्नु आफुलाई भन्दा अरुको कुरामा विश्वास गर्नु हो । आजभोलि यस्ता घटनाहरु दिनदिनै बढ्दै गएको पाइएको छ । जसको कारण श्रीमती अरुसँग स ल्कि नु भन्दा पहिले नै थाहा पाउनु जरुरी रहेको छ । तपाई श्रीमती भन्दा टाढा बस्नु हुन्छ भने यसरी थाहा पाउनुहोस् श्रीमती अरुसँग सल्केको छ छैन् भन्ने बारे ।
फोन कल :
तपाईको श्रीमती फोनमा कतिको झुन्डिन्छिन् ? तपाईको अगाडी अरुको फोन आउँदा कस्तो व्यबहार देखाउँछिन् । फोनमा बोल्दा उनको हाउभाउ कस्तो हुन्छ । तपाईसँग बेल्न र अरुसँग बोल्ने बोली कस्तो छ । श्रीमतीलाई तपाईले केही सल्लाह सुझाव दिएकी छन् की छैनन् । यस्ता कुरामा थाहा पाइराख्नुस् नत्र तपाईलाई श्रीमतीले धोका दिन सक्नेछिन् ।
केटी साथीसँग बढी घुलमिल :
केटी साथीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ । केटीहरुसँग कतिको समय बिताउँछिन् । ख्याल गर्नुहोस है नत्र केटी साथी भनेर कतै केटालाई पो भेट्न जाने हुन की । पहिले बाहिर समय नबिताउने श्रीमती पछि बाहिर धेरै समय बिताउँन थालिन भनेनी विचार गर्नुस् है अन्य काम देखाएर केटा मान्छेसँग पो बसेकी छन्की ।
नुहाउने र जीम :
सदा घरम नुहाउन अल्छी मान्ने श्रीमती घर फर्कने बेलामा नुहाएर आएको जस्तो देखिएकी छन् । पहिला भन्दा बाहिरी काममा बढी धाउन थालेकी छन् ।, ख्याल गर्नुहोस है तपाईलाई पत्तै नपाइ उनले अन्य हकर्त देखाउने पो हुनकी ।
श्रीमतीको बास्ना :
आफ्नो श्रीमती कतिको बास्नादार रहेकी छन् । उनीमा महिला भन्दा बढी पुरुष जस्तो बास्ना आउँछ । त्यस्तै खालको बास्ना आफ्नो साथीको आउँछकी त्यो पनि ख्याल गर्नुस् कतै तपाईको श्रीमती आफ्नै साथीले उडाउने पो होकी । आँखा जुधाई पहिले आँखा जुधाएर कुरा गर्ने श्रीमती तपाईले प्रश्न गर्दा एकाएक यस्तो बानी परिर्वतन गर्न थालिन भने पनि श्रीमतीको व्यवहार प्रति होसियार हुनु जरुरी छ ।
यौ**न विचलन :
यदि तपाईलाई श्रीमतीले झारा टार्नको शा रि रि क सम्बन्धमा मात्रै दिएकी त हैनन् । श्रीमती प्रतिको यौ**न रुची फेरिएको छ । पहिले भन्दा फरक तरिकाले यौ**न सम्बन्ध राख्न सिकाउँछिन् । नयाँ नयाँ उपाय अपनाउने तिर लाग्छिन् । हो । त्यस्तो छ भने पनि ख्याल गर्नुस् यौ***न सम्बन्ध प्रतिका धेरै कुराहरु श्रीमतीमा देखिएको संकाको विषय हो । यो जान्नुस की तपाईलाई श्रीमतीले धोका दिँदै छिन् ।